Umbulali kaHannah Wilson
I-Bar efanayo yeSitye njengoLauren Spierer
Ngethuba lokusa kwintsasa kaLwesihlanu, ngo-Ephreli 24, 2015, umfundi oneminyaka engama-22 ubudala wase-Indiana University, uHannah Wilson, walahleka kamva emva kokuba abahlobo bakhe bammise eteksi kwiBar Sports Sports emva kokuthatha isigqibo sokuba wayedywe kakhulu ukuba angene ngaphakathi. Umzimba wakhe ufunyenwe ngo-8: 34 ngomzuzu odlula kwiPlum Creek Road kufuphi ne-State Road 45 e-Brown County, malunga nemizuzu engama-30 ukusuka ekhaya.
Nazi iziphumo zakamuva kwiimeko zeHana Wilson:
I-Messel ifuna iNgxowa-mali yoKhuselo
NgoNovemba 5, 2015 - Umntu osolwa ngokubulala umfundi wase-Indiana University uzakufumana ithuba lokufuna iimali zikawonke-wonke zokuzikhusela kwakhe, ijaji iye yalawula. UDaniel Messel ufuna imali yamangqina onobuchule kunye nabaphandi ukuba balungiselele ityala lakhe lokubulala uHana Wilson.
UMessel, othi ungumntu osweleyo , wathi unelungelo lokugwetywa elungileyo luya kuphazamiseka ukuba akavunyelwanga ukuba aqeshe amangqina kunye nophando. Ijaji yagqiba ukuvumela abameli bakaMessel ukuba baphikisane nesidingo seengcali phambi kooshushisi kunye neendaba.
Kwimigqaliselo yangaphambilini, uMessel wanikezelwa ukuqala kokuvalelwa kwakhe, okokuqala kwakuhlelwe ngoJulayi. Ngoku kulungele ukuqala ngoFebhuwari ukunika abameli bakhe ixesha lokulungiselela.
UMessel uye wacelwa utshintsho lweendawo zokuvavanywa ngaphandle kweBrown County, e-Indiana, kodwa ijaji lilibazise eso sigqibo kuze kube yilapho emva kokukhethwa kweJury.
UMessel wabanjwa emva nje kokuba umzimba u-Wilson oneminyaka engama-22 ubudala ufunyenwe ngo-Ephreli ngenxa yokuba ifowuni yakhe ifumaneka kufuphi nomzimba wakhe.
UWilson Murder Uxhamle kwiSpierer Case?
Ngo-Ephreli 28, 2015 - Amagunya azama ukufumanisa ukuba ukuphangwa nokubulawa komfundi oneminyaka engama-22 ubudala wase-Indiana University ngoLwesihlanu kudibene nokunyamalala komfundi oneminyaka engama-20 we-IU oye watyelela ibha yezemidlalo efanayo ebusuku. yaphela.
UHannah Wilson ubanjwe wabulawa emva nje kokuba abahlobo bakhe bamfaka eteksi eKoloyy's Sports Bar ekuseni ngoLwesihlanu. ULauren Spierer wamshiya izicathulo zakhe kunye neselfowuni yakhe kwindawo enye ubusuku obonakalayo ngoJuni 3, 2011.
"Sifuna ukuxhamla," iColomington Police Capt.
Nangona kunjalo, ummeli wangaphambili we-FBI osebenza ngoku kukhokelela kwiimeko ze-Spierer uthe uya kumangaliswa ukuba ezo zimbini zihlobene.
"Ngaba ngaba kukho ikhonkco? Ndicinga ukuba kunokwenzeka," kusho uBrad Garrett, ngoku umcebisi weendaba. "Ndiya kuthetha ngokusekelwe kwimiba yendima endiyihlakulelayo-kwaye andazi ukuba ngaba kunjalo-(ba) abayi kulungela loo mzekelo. Kwimeko kwaye sincede sifumane uLauren. "
UGarrett uthe kwakhona kuya kunzima ukucacisa kweli nqanaba ukuba loo mabini adibeneyo ngenxa yokuba ulwazi oluncinane lukhutshwe kwi-Spierer yophando.
"Andizange ndijongane necala apho amapolisa akhulula ulwazi oluncinci," watsho. "Ndiqinisekisa ukuba bayazi izinto ezininzi. Ndiqinisekile ukuba bajonge umnxeba wefowuni yomntu ngamnye obenokulala naye ubusuku."
I-Indiana Student yathathwa, ibulewe
Ngo-Ephreli 24, 2015 - Umntu oneminyaka engama-49 ubudala waboshwa waza wahlawuliswa ngokubulawa komfundi oneminyaka engama-22 ubudala wase-Indiana University emva nje kweeyure emva kokuba umzimba wakhe ufunyanwe kwindlela eya kwiphandle.
UDaniel Messel ugwetyelwe ekufeni kokufa kukaHana Wilson, oyunivesithi.
Amapolisa athi uWilson kunye nabahlobo bakhe bachitha u-Lwesihlanu ubusuku bephuza kwindibano e-Hilton Garden Inn. Emva koko beza kwiBar yezemidlalo yaseKilyy, baqikelela ukuba uWilson uphiswe kakhulu ukuba angene kwibhagi kwaye bamfaka eteksi.
Bambona befika kwi-cab kunye banike umqhubi wakhe idilesi yasekhaya. Wayengabonwa kwakhona kwaze kwaba yilapho umshayeli ongu-9-1-1 ebika ukufumana umzimba wakhe kufuphi neLake Lemon malunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka eyunivesithi.
Ukubanjwa kwesigxina kwafika ngokukhawuleza ngenxa yokuba ifowuni ifumaneka kufuphi nomzimba kaWilson odibene noMessel, ongayibonanga umsebenzi ngoLwesihlanu kwintengiso yokuprinta. Wabanjwa xa ebuya kamva kwindlu ephathekayo yena wabelana noyise oyise.
Xa wayebanjwe, uMessel wayehamba ekhaya ephethe isambatho seengubo phantsi kwengalo yakhe.
Iingubo zathathwa kunye nekhompyutheni ye-Messel kunye nesithuthi emva kokuba i-troopers isebenzise imvume yokukhangela .
Ngokutsho kwamaphepha enkundla, uMessel wabonakala ephethe amanqaku emagqabini akhe ngexesha lokubanjwa kwakhe. Ukukhangela kamva kwe-Kia yakhe yafumana i-splatter yegazi kwicala lomqhubi we-SUV kunye negazi kunye neentloko zeebhokhwe ezimnyama kwi-console yesithuthi.
UGerald Messel, oyise, watshela abaphandi ukuba uMessel usandul 'ukuthetha ngentlanganiso intombazana egama linguHana kwimivalo yendawo.
I-coroner yathi uWilson wafa phakathi kwe-1: 30 ekuseni kunye no-4: 30 ekuseni.
I-Indiana State Police ithi uphando lwabo lucacise ukuba umqhubi wekhabhini wathatha uWilson eKilroy ngo-1 ekuseni waza wamthumela kwindawo yakhe yokuhlala e-East Eighth Street.
UMessel unecala lolwaphulo-mthetho kwaye wagwetywa iminyaka eyisibhozo entolongweni ngo-1996 emva kokumangalelwa enetyala ngebheri elibulalayo kunye nebhethri ebangela ukulimala komzimba.
Ugcinwe ngaphandle kwesibophelelo ejele laseBrown County kwaye ityala lihlelwe ngoJulayi 22.
Abasetyhini Ekubulaweni Kokufa eCalifornia
I-Case Barton Corbin
Iphrofayili Yokufa Ukugqithisa Ibanjwa Brenda Andrew
Uhlaziyo: I-Holly Bobo Case
Iimvavanyo zoMdumo kunye neeNkundla zeNkundla
Ubungqina obuninzi: U-Scott Peterson Trial
Izigwenxa Zokufa Zibuyisa Ibanjwa likaPatricia Blackmon
Iprofayili kaDennis Rader - I-BTK Strangler
Elinye Ipesenteli zeGeyile
I-Ivory Soap Trick-Making Foam kwi-Microwave
Ngubani owayengumGrike ongumlando wamaGrike uHerodotus?
Imfazwe YaseMelika: iMfazwe yaseChickamauga
Imfazwe kaKumkani kaFilipu: 1675-1676
Izinto ezili-10 zokumazi ngoLyndon Johnson
I-Skill Water Water Open of Weighting
Isiqithi Sokuzinza - Ukufumanisa Izinto Ezintsha Eziphezulu
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi esingaqhelekanga 'Funda' (ukufunda)
2008 I-Harley-Davidson Lineup Gallery kunye nesiKhokelo somthengi
UJedem das Seine - Umzekeliso wesiJamani ushintshile ngeMbali
Ezi zi-4 ziCatshulwa ngokupheleleyo kwiMbali yehlabathi
Yiyiphi iStend Blending okanye iTortillon?
Iingcaphuno zikaAndrew Jackson
Izibonakaliso Uxhomekeke kwiSikolo soMthetho
"Pierre Menard, Umbhali we 'Quixote'" Isikhokelo soFundo
Imifanekiso ye-Feathered Dinosaur kunye neeprofayili
Iyiphi iProjekthi yeSayensi yeNzululwazi?
Iimpawu zoPhulo lokuTlola
I-Camera Obscura kunye nePainting
Ngaba uMnu. Rogers u-SEAL SEAL okanye u-Marine Sniper?
Indlela Yokutsho Amazwe Ehlabathi NgeFrentshi